BREAKING: Sh Shariif, Xassan Sh & 49 Xildhibaan oo ku wajahan Kismaayo.
MUQDISHO(P-TIMES)- Duulimaad gaar ah oo diyaaradeed ayaa berrito ka qaadaya magaalada Muqdisho, Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed iyo 49 Xildhibaan in ka badan oo katirsan baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya.
Madaxweynayaashii hore iyo mudanayaasha baarlamanka ayaa safarkoodan uu ku aadan yahay magaalada Kismaayo oo ay uga qeybgalayaan munaasabada Caleema-saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Max’ed Islaam.
Xukuumadda Faderaalka ayaa qorsheynaysa in ay joojiso duulimaadkan, balse walaac badan ayaa ka taagan, waxaana wararku cadeynayaan in isku dayga qorshahan uu kasocdo Madatxooyada Faderaalka.
Mudane katirsan baarlamaanka oo wafdigaas ka mid ah ayaa u sheegay warsidaha Puntlandtimes.com in madaxdan hore iyo mudanayaashuba ay ka dhoofayaan Muqdisho, oo ay toos uga dagayaan magaalada Kismaayo.
Haddii ay talaabadaas dhacdo ayaa ka dhigan in ay ku fashilantay dawladda Faderaalka arrimaha Jubbaland, waxaana ay dadaal badan ku bixinayaan sidii loo baajin lahaa, haddii ay dhacdana waxay ka dhignaan doontaa marxalad culus oo xagga siyaasadda ah.